Reer Maxamed iyo xukuumada, mid-walba xeerar baa qabanaaya dastuuriya kuwo kalena wey u hiilinayaan sida hoos ku xusan ,waxaanse 2 daba leeyahey!! By Dr.khadar maxamed faahiye | Awdalnation.com
Somalidu waxay tidhaa:( Gar xeer diidey iyo Ummad gole diidey midina guul ma dhaliyaan)
Xukuumada awoodeheeda sharci iyo masuuliyadeeda dhulka
Dalka ,dadka iyo deegaanka waxa ka masuul ah had-ba dawlada xilka iyo masuuliyda u igman xiligii la joogaba ; sida ku cad sid xubinta kowaad ee dastuurka qaranka qodob kiisa 12 faqradiisa 1aad ilaa 6aad dhigayaan .
Si lamid ah qodobka 11aad ee dastuurka qaranku waxa uu ka hadla yaa dhaqaalaha dalka sida loo maareynaayo , faqradiisa 1aad ilaa 3aad.
Xukuumaddu waxay awood u leedahay inay yeelato, gacanta ku hayso, hanti-guurto ama ma-guurto ah, inay iibsato, iibiso, kiraysato, kirayso, ku bedelato qiimo u dhigma ama ku samayso hantidaas tasaruf kasta oo sharciga waafaqsan.
Dawladdu waxay dhiirri-gelinaysaa wax-soo-saarka wadaniga sida beeraha, xoolaha nool, kalluunka, macdanta, faleenka, xabagta iyo warshadaha ku shaqeeya wax-soo-saarka wadaniga ah.
Xeerarka ku xusan faqradaha qodobka 11aad iyo 12aad waxa awood sharci u leh sameyntiisa golaha wakiilada iyaagaana laga helayaa, nuxurku se waa qodobadaas oo wey inagoogu filan yihiin daliil lagu kala hagaago .
Soomaalidu waxay tidha:(Xaajo nin kuu qaba lama xumeeyo)
Reer maxamed iyo muwaadiniinta kale ee dalka waxa u hiil ah dastuurka qaranka sida ku dhigan xubita 1aad, qodobadiisa 25aad,26aad iyo qodobka 27aad iyo dhamaan faqradahooda oo dhan.
Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn.
Ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro, haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin, ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi.
Dawladda ayaa muwaadiniinta u dammaanad qaadaysa xuquuqda iyo xorriyadaha. Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad gudubkooda.
Dhammaan xorriyaaka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale.
Mas’uuliyadda dembi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay oo keliya.
Eedaysanuhu waa dembi-laawe inta aanu maxkamad horteed kaga caddaanin dembi.
Qofka xorriyadda looga qaaday fal-dembiyeed lagu eedeeyey awgeed, waxa uu xaq u Ieeyahay in lagu hor geeyo maxkamad 48 (siddeed iyo afartan) saacadood gudahood, laga bilaabo marka la qabtay.
Waxa reebban in qofka lagu dirqiyo qirasho dembi, marag furid, ama dhaar. Mid kasta oo arrimahaa ka mid ah oo qofka khasab lagu marsiiyaana wax-ka-soo qaad ma laha.
Waxa reebban in qofka lagu xidho meel aanu xeerku bannayn.
Xeerka ayaa xadaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan.
Marka qof la qabto iyo marka la cusboonaysiinayo sii-hayntiisa waxa uu xaq u leeyahay in la ogeysiiyo arrintiisa cidda uu doorto.
Xabsigu waa edbin iyo toosin. Dawladana xilbaa ka saaran kor-u-qaadidda akhlaaqda iyo xirfad baridda maxbuuska si uu ugu noqdo bulshada isaga oo yeeshay dhaqan suubban.
Ciqaabta lagu mutaysan karo jebinta faqradaha 1aad ilaa 7aad ee qodobkan xeer ayaa caddaynaya.
Soomalidu waxay tidhaa( Arrin xumo abaar ka daran)
Dawlada waxa la gud-boon sahamin ku filan ,xogo’ogaal dal iyo dad ba leh, wareysi , ka talla-galin,la-tashi, heshiis lagalid iyo wax isku ogaansho dhan walba oo ay arrimuhu khuseeyaan si hawlaha iyo dadaalada ay isku kalifaysaa u guuleystaan, oo aanu xaalku noqon ( war la’aan baa col hodey) oo halka ay dawladu iska leedahay wax soo kordhi aad taariikhda ku gashaan, aaney kala kulmin khasaare hor leh iyo fashil dib looga qoomameeyo, sidii horey u soo dhacdey marar iyo goobo badan ba.
Reer maxamed iyo dhamaan beelaha kalee dalka degan waxaan leeyahey:
( tacab baa lagu hodan lagu noqdaaye tuugsi laguma dhergo)
Arrin ma a’ha qori baan la dul fadhiisanayaa goob kasta ,buur,banaan iyo bad ba , meel kasta oo khayraad lagu sheego, oo waan is hortaagayaa nolosha,dadka ,deegaanka iyo dhamaan Somaliland oo dhan in ay wax u soo kordhaan, caqli maaha sidaasi , in nin waliba iyo qabiil waliba qori la hor fadhiisto deegaanka uu deganyahey ee kheyraad lagu sheego, caqli wanaagsan maaha sidaasi !! bal u fiirso tan iyo illaa ingiriiskii iyo gumeystayaashii kaleba meel walba qori la soo hor fadhinay, bal maxaynu taran saney ee inoo soo kordhey?? Buur ,banaan iyo bad ba illaahey ayaa abuurey iyaga oo jira ayeynu arlada nimi oo ku beeraney , isla iyaga oo sidaasi u jirana weynu ka dhimaneynaa arladan , aadamuhu arladan safar ayey ku marayaan!!!
Maxaa inala gud-boon oo haboon?
Waxa inala gud-boon in kheyraadka rabi inoo abuurey ka faa’ideysano maalmaha aynu nool nahey, maanta intiinaa tv ga ka hadleysaa , alle kama dhigee hadiiba aad dhimataan , siimoodi qiimo idiin malaha, waxa ha boon in inta aad nooshihiin kheyraadka la soo saaro bad iyo bariba idina aad soo dhaweysaan , heshiisna kala saxeexataan dhexdiina iyo xukuumada kheyraadka bada iyo barigaba la soo saaro , gacma furan lagu soo dhaweeyo waxkasta oo horu socod ah, tusaale maanta hadii la yidhaa ( buurtii libaaxley) ayaa dahab iyo dheeman lagu sheegay in aan qori la dul fadhiisto ,deedna idhaahdo car bal yaa iigu imanaaya? Waa ceeb iyo fikir duug ah,dib u socodnimo iyo tallo seeg , Waxa se mudan inta wax walba lagu soo saaro heshiis la isla ogyahey deedna bahaber celida buuraha ku rafaadsan, maxamed casaha ,samaroon oo dhan iyo ciisaha inala degaba iyo Somaliland ba barwaaqada iyo kheyrku gaadho, ummada iyo caalamkana la jaan qaadno, maalmaha dunidana si wanaagsan loo noolaado, rafaadka laga baxo afrikaanka ragaadiyey.
Inta aad nooshahey qof walba waxa u dan ah in uu si wanaagsan u noolaado , kuwa soo socdana nolol ,rajo iyo mustaqbal wanaagsan u diyaariyo, ee looma baahna buur qori lala dul fadhiyo ,oo wax walba la canda dawlo iyadoo la baahan yahey ,, maanta shaqo la’aan baahsan baa jirta, dhalin yaradii oo si joogta ah jaamacadihii uga soo baxeysa , mustabalka oo adag, tahriib daran, silic ku kor iyo silic ku noolaasho ayaa jira baahsan, markaa ha la badalo caqligii hore ,caqli cusub ,fikrado cusub iyo horusocod ayaa haboon oo dadka wada gaadhaya.
Tallo iyo soo jeedin:
Somalidu waxay tidhaa( Tallo qori saaran iyo tumaati sokeeye ,Tagoog jabey baa laga dhaxlaa )
Marka aad tahey nin weyn oo waliba beel cod keed ku hadlaaya ,sida suldaan, chief caaqil ama caaqil ba , waxa mudan in hadalka loo meel dayo,oo aan laga tagin miisaanka, dhaqanka,akhlaaqda,
Laga illaaliyo hadalka erayada dhiifta iyo naxliga reebaay. Arrin ma a’aha in markiiba hadalka qori caaradii ,hanjabaad iyo wixii la hal-maala lagu furfurto ama lagu daro hadalka, wax kasta oo darani dadka iyo dalka ayuu u daran yahey , caadifada hala’ xakameeyo oo caqligu ha talliyo oo ha xoog bato.